NYI LYNN SECK 18+ DEN: တစ်ခာလေး တင်မိပာတယ်
Posted by NLS at 4/19/2010 12:22:00 AM
ညီ ရေ စိတ်ပျက်မယ် ဆို လဲ စိတ်ပျက် စရာ...comment ၅၀၀ ကျော် followup လုပ်ထားလို့ ဖတ်လိုက်ပါတယ်... တချို့ တော်တော် ဆိုးပါတယ် ..ဓါတ်ပုံတွေ ကို ပထမဆုံး တင်လိုက် နိုင် သူ တယောက် ကို ချီးမွမ်းပါတယ်.. စောင့်ဖတ်နေပါ့ မယ်
ကိုညီလင်းဆက်ကိုတော့ ချီးကျူးပါတယ် ပထမဆုံး အဲဒီသတင်းကို တင်နိုင်လို့ပါ အားလုံးကအဲဒီသတင်းကို ကြားပြီး အရမ်းကို သိချင်တဲ့ အချိန်မှာ ဓာတ်ပုံတွေနဲ့ တကွ အခြေအနေကို တင်ပြနိုင်လို့ပါ ၊ မြန်မာလူမျိုးနဲ့ ပတ်သက်လို့ကတော့ စိတ်ထဲမထားပါနဲ့ ကိုယ့်လူမျိုးကိုက အဲလို၊ ကိုယ်ကျတော့ဘာမှမလုပ်ချင်ဘူး သူများလုပ်ထားရင် အသင့်သုံးမယ် မကောင်းဘူးပြောမယ် စကားပြောရင် စည်းကမ်းမရှိဘူး ။ကိုယ့်လူအကြောင်းကို အသိဆုံးမို့ ဥပေက္ခာ ထားလိုက်ပါ နောက်လည်း ဆက်ရေးပါဦး (သတင်းကောင်းများဖြစ်ပါစေ)
ကိုညီလင်းဆက်လုပ်နိုင်တာအများကြီးထဲက လုပ်နေတာ တစ်ခုကို အကောင်းဆုံးလုပ်ထားတာပဲ... ကျွန်တော်တို့တွေက သူများကို အပြစ်တင်တဲ့နေရာမှာ လူမျိုးနဲ့ချီပြီးတော့ကို ဂုဏ်ယူစရာကောင်းလောက်အောင် တော်တယ်.. ကိုယ်သာမလုပ်နိုင်ရှိရမယ်...သူများကို အပြစ်ရှာပြီးပြောတတ်လိုက်တာမှ ဟိုဘက်ကမ်းတောင် ရောက်သေးတယ်.. ကျွန်တော်ဆို ပုံတွေကိုအခုမှလာ ကြည့်ရတယ်... ကျေးဇူးတင်တယ်... မီဒီယာသစ် အယူအဆနဲ့ ကိုယ်လုပ်နိုင်သမျှလုပ်နေတာကို အားကျတယ်ဗျာ...
သေဆုံး၊ ဒဏ်ရာရသူအားလုံးအတွက် ဝမ်းနည်းရပါကြောင်းနဲ့၊ နောင်ဘဝဆိုတာရှိရင် ဒီလိုအဖြစ်ဆိုးတွေ မကြုံကြပါစေနဲ့လို့ မျှော်လင့်ဆုတောင်းပါကြောင်း...၊ မြန်မာပြည်သူ ပြည်သားအပေါင်း.. ဘေးအန္တရယ်အမျိုးမျိုးက ကင်းလွတ်ကြပါစေကြောင်း မျှော်လင့်ဆုတောင်းပါတယ်..
ကိုညီလင်းဆက်ရဲ့ "ပါ" ကို "ပာ" လို့ရေးတာကို ထွင်တာလား လို့တောင် ဝေဖန်နေကြသေးတယ် :P
သာမာန်လူတွေက အနက်ရောင်နော် ညီလင်းဆက်နဲ့ အပေါင်းအပါတွေက အစိမ်းရောင် ခွဲခြားထားတယ် လို့လည်း ပြောနေကြတယ်နော် မပြုံးပဲနဲ့ ၀ါးလုံးကွဲသာ ရယ်လိုက်ချင် :D
စိတ်မညစ်ပါနဲ့ဗျာ၊ ရေးစရာရှိတာ ရေးပါ။ အချိန်ကပဲ စကားပြောသွားပါလိမ့်မယ်။ ဒီလို exclusive ပို့စ်မျိုးကို အရမ်းတန်ဖိုးထားပါတယ်။
ကြိမ်းသေပြောနိုင်တာက နယ်စပ်က အတိုက်အခံတွေ အဲလို လုပ်ဖို့ အစွမ်းအစကိုမရှိတာအမှန်ဘဲ ကိုယ်တွေ့ မို့လို့ပါ စစ်တပ်ကိုအရမ်းကြောက်ကြတယ် ဖြစ်နိုင်ခြေအရှိဆုံးက နအဖထဲကလူတွေဘဲ သူတို့မှာ ရည်ရွယ်ချက်ကြီးကြီးရှိတယ် ဒီလိုအပြစ်မဲ့ ပြည်သူတွေကိုစတေးပြီး အတိုက်အခံတွေကို နှိပ်ကွက်ဘို့ပဲ လူထုကိုကြောက်အောင်လုပ်ထားပြီး ရွေးကောက်ပွဲမှာ လုံခြုံရေးအကြောင်းပြ လူထုကိုမဲရုံတွေနား ကပ်မလာအောင် လုပ်ဖို့ရယ် စစ်တပ်ကို တပ်လှန့်ကာ အဖျက်သမားတွေကာကွယ်ဖို့ဆိုပြီး ဆွဆြောင်ထားဖို့ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ဘဲ ဒီလိုမျိုး ဖြစ်ဖို့ အဓိကဦးဆောင်တာ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး မြင့်ဆွေ ဘဲ သူက၂၀၀၅ ခုနှစ် ဗုံးဖောက်တာ ဒဂုံစင်တာ juction 8 ဗုံးဖောက်တာသူဘဲ ခုလဲ သူညွှန်ကြားတာဘဲ
ကျနော်လည်း အစ်ကို့ post & photos တွေကို fwd လုပ်တယ်
ဆိုဒ်မှာလည်းတင်တယ်.. ကြည့်မရတဲ့ ဝင်မရတဲ့သူတွေကို မေးလ်ပို့ပေးလိုက်တယ်
တော်တော်များများရဲ့ gtalk custom msg မှာလည်း အစ်ကို့ လင့်ခ်ကို တင်ထားကြတာတွေ့တယ်၊ ဘယ်သူမှ ငြင်းမရတဲ့ အချက်က ဒီသတင်းဘယ်သူ့စီက ဦးဦးဖျားဖျား မြင်တွေ့ဖတ်ရှုခွင့်ရတယ် ဆိုတာပါပဲ။ မနှစ်ကတော့ "သင်္ကြန်ပြာပြာ ရေကူးကန်မှာ" ဆိုတဲ့ ပိုစ့်လေးပေါ့၊ ဒီနှစ်ကတော့ ဒီသတင်း(ပိုစ့်) လေးအတွက် ဂုဏ်ယူပါတယ်
အစ်ကိုရေ။ ဘယ်သူက ဘာဆိုတာ သိနေကြတာပဲဗျာ။
ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လဲ ခင်ဗျားဓာတ်ပုံတွေ မြင်တော့ လောရှည် - ကတဲ့ပွဲမှာ (ခွင့်ပြုချက်ယူပြီး)တင်ဦးမလို့ပဲ။ ဒါပေမဲ့ အင်းဂလိပ်လို ရေးထားတဲ့ သတိပေးစာကို မြင်တော့ အကြောင်းရှိမှာပဲဆိုပြီး မတင်ခဲ့ပါဘူး။
ဓာတ်ပုံရိုက်တာကို ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ လုံခြုံရေးအရာရှိတွေက မတားပါဘူး။ မပိတ်ပင်ပါဘူး။ ကျွန်တော်လဲ တော်တော်ကြီးတဲ့ ကင်မရာ (prosumer class) တစ်လုံးနဲ့ ဟိုနားရိုက် ဒီနားရိုက် လုပ်ဖူးပါတယ်။ သတင်းတနေရာမှာ ဖတ်လိုက်ရသလို လုံခြုံရေးက ကင်မရာ သိမ်းထားလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ စုန်းပြူး လုံခြုံရေးက ဟောက်စားလုပ်တယ်ပဲ ထင်ပါတယ်။
နောက်တခု ဖြစ်နိုင်တာက အဲဒီ ရိုက်ယူသွားတဲ့ ပုံတွေထဲမှာ အမှုကို ဖော်ထုတ်ဖို့အတွက် သက်သေပါတယ်ထင်လို့ တောင်းယူထားလိုက်တာလဲ ဖြစ်နိုင်တယ်။
သက်သေခံအဖြစ် သိမ်းဆည်းတယ်ဆိုတဲ့ စာရွက်ကို တောင်းယူဖို့နဲ့ ပေးဖို့ ပြည်သူနဲ့ လုံခြုံရေးကို ပညာပေးဖို့ လိုပါမယ်။
ကိုစိုးစိုး (သို့မဟုတ် မစိုးစိုး)ခင်ဗျာ ...
မြင့်ဆွေဆိုတာ အသေအချာပဲလား။ သေချာရင် သက်သေ အထောက်အထားပြစမ်းပါ။ သက်သေအထောက်အထားရှိမှ ယုံမယ်။
၁) မည်သူလုပ်မှန်း မသိပေမယ့် မည်သူပဲ ဗုံးဖောက်ဖောက် မလုပ်သင့်ပါ။ ဒီလို လုပ်ရပ်မျိုးကို အားမပေးပါ ။
၂) ကိုယ်တိုင်မဖောက်သော်လည်း ဖောက်သူများ လုပ်ရပ်ကိုကြည့်ပြီး ပျော်ရွှင်အားပေးသူများကို ကန့်ကွက်ရှုံ့ချပါတယ်။ ကိုယ်က မလုပ်ရင်တောင် အားပေးပျော်ရွှင်နေတယ်ဆိုရင် တခြားသူတွေ အထင်မှားမယ်ဆိုလည်း မှားစရာ။
၃) သတင်းအချက်အလက်နှင့် ဓာတ်ပုံများကို အချိန်ပေး လျင်မြန်စွာ ဖော်ပြပေးသော အကိုညီလင်းကို ကျေးဇူးအမှန်တင်ရှိပါတယ်။ သတင်းတင်ပြသူကို သတင်းတင်ပြပေးတယ်လို့ပဲ မြင်ပါတယ်။
၄) တိုက်ခိုက်မှုဆိုတာ အကိုညီလင်းလို ယောက်ျားလေးတစ်ယောက်ကိုတင်မဟုတ် ၊ မိန်းကလေးကို ပိုတိုက်ခိုက်ပုံက ပိုမိုဆိုးရွားတဲ့အတွက် ထိုသူတွေ ဘယ်သူပဲဖြစ်နေပါစေ ဂရုမစိုက်ပါနဲ့ .. ။
၅) သတင်းဖော်ပြခဲ့သော ပို့စ်ကို ဖျက်ရန်လိုအပ်သည်ဟု မထင်ပါ။ လူအမျိုးမျိုး စိတ်အထွေထွေနှင့် ပြောချင်ရာ ပြောတတ်သော လူ့သဘာဝကြောင့် လွှတ်သာထားပေးလိုက်ပါ။ ကိုယ်တိုင်လည်း မလိုအပ်ရင် မဖတ်ပါနဲ့။
၆) အကိုညီလင်းကို အီးမေးလ်ရေးသောသူပြောသလို အကုသိုလ်ပေးသည်ဟု မယူဆပါ။ မမြင်ချင်သောသူ လာမဖတ်ပါနှင့်။ ရှင်းပါသည်။ မဖတ်မနေရဟု မည်သူမျှ မသတ်မှတ်ထားပါ။
လူအတော်များများကို စိတ်ကုန်၍ အကိုညီလင်းပြောသလို ညီမလည်း ကိုယ့်ဘ၀နဲ့ကိုယ် အေးဆေးနေတာ ကြာပါပြီ။ အကောင်းဆုံးက ကိုယ့်ဘ၀ကိုယ် တိုးတက်အောင် ကြိုးစားရင်း ကူညီနိုင်တဲ့ လူမှုရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်တာပါပဲ။ သေဆုံးသွားသူများအတွက် ကောင်းရာမွန်ရာ ရောက်စေဖို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်။ သေဆုံးသွားသူများရဲ့ မိသားစုဝင်အချို့ကို မေးမြန်းထားတာတွေ ဖတ်ရင် ပိုစိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်။ အကောင်းဆုံးက မြန်မာပြည်သူလူထု အေးချမ်းသာယာ ပျော်ရွှင်သော နေ့များကိုသာ ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေ။
သမာသမတ်ကျကျတွေးပြီး သုံးသပ်ဆင်ခြင်တတ်တဲ့ စိတ်ကိုတော့ သဘောကျပါတယ် အစ်ကိုရေ..
ခလုတ်တိုက်တောင်မှ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ပြန်လည် မဆင်ခြင်နိုင်ပဲ။ တစ်ယောက်ယောက်ကို မဲပြီး အပြစ်တင်တတ်တဲ့ လူမျိုးတွေကတော့ ပိုပိုများလာပြီ။ သိပ်စိတ်အချဉ်ပေါက်ဖို့ကောင်းတဲ့လူတွေ။
နိုင်ငံရေးသမားလို့ သူတို့ကိုယ် သူတို့ ခံယူထားတဲ့ အုပ်စုတွေဟာ ဒီလိုပါဘဲ
အခြင်းခြင်းကျတော့ အသေခွပ်တယ် မတည့်ကျဘူး
ဒါပေမယ့် အပြင်လူတစ်ယောက်ယောက် နဲ့ နဲနဲလေး ငြိလိုက်တာနဲ့ ဘယ်သူမှားတယ်မှန်တယ် သေချာတောင် မသုံးသပ်တော့ဘဲနဲ့ ကျီးကန်းတွေလို ခွေးအတွေလို ထအာ ထဟောင်တော့တာဘဲ
ငါနဲ့ မတူ ငါ့ရန်သူ ဆိုတာမျိုးပေါ့
By the way, ကျွန်တော့်ဆီကို သူများ ပို့လာခဲ့ပြီး တင်လိုက်မိပြီးမှ ကျွန်တော်လဲ အဲ့ဒိ ဓါတ်ပုံကိစ္စ ကိုညီလင်းဆက်ဆီက ဆိုတာရယ် တင်းနေတယ်ဆိုတာရယ် သိတာဗျ
ကျွန်တော်ကတော့ အစထဲက Credit ပေးထားပါတယ်
တင်ပြီးမှ ပြန်ဖြုတ်ရမှာကလဲ တစ်မျိုးကြီး ဖြစ်နေလို့ပါ
၂၀၁၀ သင်္ကြန် ပိုစ့်တွေ စတင်ပေးကတည်းက အကို့ကို အရမ်းကျေးဇူးတင်နေတာပါ။ အဝေးကလူတွေ သင်္ကြန်ကို လွမ်းနေမယ်မှန်းသိလို့ စေတနာနဲ့ တင်ပေးနေတယ်ဆိုတာ ခံစားမိပါတယ်။ ဗုံးသတင်းကိုလည်း တိတိကျကျ မြန်မြန်ဆန်ဆန် တင်ပေးနိုင်လို့ ကျေးဇူးထပ်တင်မိပြီး အကို့ လုံခြုံရေးအတွက်တောင် စိုးရိမ်မိပါသေးတယ်။
အမြဲအားပေး၊ လေးစားနေပါတယ် ကိုညီလင်းဆက်...
သတင်းနဲ့အညီ ဓာတ်ပုံနဲ့တကွ...သေချာ ဖတ်လိုက်ရလို့ ကျေးဇူးတကယ် တင်ပါတယ်။
thumbs up ko lynn seck!!!
go go jia you!!!!!!!!!
ညီလင်းဆက် Blog မှာ ဓာတ်ပုံနဲ့တကွ ဖတ်လိုက်ရတာကို ကျေးဇူးတင်နေတာ။
သတင်းကို အမြန်ဆုံးဖော်ပြပေးနိုင်တာ ဂုဏ်ယူပါတယ်။
စဖတ်ကတည်းက သတိပြုမိတာ ပြည်တွင်းမှာ ဖွံ့ဖြိုးလာတော့မယ် citizen journalism ဗျ။ ဂုဏ်ယူမိပါတယ်။ ဖြောင့်ဖြောင့်သာ ဆက်လျှောက်ပါခင်မျာ။ ကိုညီလင်းဆက်လို ညီအကိုတွေ များလာသင့်ပါတယ်။ တင်ပြပုံလည်း ကောင်းပါတယ်၊ ethical လည်းဖြစ်ပါတယ်။ အဖြစ်မှန်အတိုင်း လက်မခံနိုင်တဲ့ လူတွေများနေလို့ ကော်မန့်စစ်တလင်းဖြစ်သွားပေမယ့် ကျွန်တော်ကတော့ ကြိုက်တယ်။ ကော်မန့်တွေထဲမှာ ရေးသူတွေရဲ့ အခြေခံအတွေးတွေကို လှစ်ခနဲ လင်းခနဲ မြင်ရတာကိုး။ စာဖတ်သူတွေကိုလည်း အကုန်ဖတ်ဖို့ တိုက်တွန်းချင်တယ်။ ဖတ်ရသမျှထဲက fact နဲ့ စာရေးသူတွေရဲ့ နောက်ခံ idea တွေ ကိုခွဲခြားကြည့်နိုင်တဲ့အကျင့်လေးပေါ်ထွန်းလာရင် အဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ ထိရောက်မှုပါပဲဗျာ။ စိတ်မပျက် စိတ်မညစ် ဒေါသမထွက်ပါနဲ့။ မီဒီယာရဲ့ ထိရောက်မှုကို ယုံလိုက်ပါ။ အားပေးလျှက်။
ကိုယ် ကိုယ်တိုင်ပဲ အဲဒီ စကားလုံးနဲ့ အရေးအသားကို သတိပြုလိုက်မိတယ်။ ရွဲ့ရေးထားသလား၊ အတည်ပဲ ရေးထားတာလား မသိဘူး လို့တောင် တွေးမိတယ်။ ဒါပဲ။ ဒီလောက်နဲ့ပဲ ရပ်သွားတယ်။
အဲဒီ အခိုက်အတန့်မှာ အဖြစ်အပျက်နဲ့ ယှဉ်တော့ ဒီစကားလုံး ဘာအရေးကြီးသလဲ။ အဲဒီ အခိုက်အတန့်မှာ သေသွားတဲ့ လူတွေနဲ့ ယှဉ်တော့ နောက်မှ ရောက်လာတဲ့ ရဲတွေ ကောင်းခြင်း မကောင်းခြင်းဆိုတာ ဘာအရေးကြီးသလဲ။ အဲဒီ အခိုက်အတန့်မှာ အဲဒီ ရဲ တွေကို ကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့ လူတွေက ဘယ်လို ကြိုတယ် မကြိုဘူးဆိုတာ ဘာအရေးကြီးသလဲ။
လူတွေက ဘယ်လို ကြိုတယ် မကြိုဘူး ဆိုတာကို သရုပ်ဖော်ထားတဲ့ အရေးအသားကို ဝေဖန်ရအောင် အဲဒီ အခိုက်အတန့်မှာ ရုပ်ရှင်ရိုက်နေတာလဲ မဟုတ်ဘူး။ အဖြစ်မှန်ကို ကိုယ်မြင်ရတာလဲ မဟုတ်ဘူး။
ဘလော့ဂါက သရော်ပြီး ရေးထားတယ် ဆိုတော့ရော ???
လူတွေက တကယ်ကို ကြိုနေကြတယ် ဆိုတော့ရော ???
ဘာကို အရေးကြီးနေကြတာလဲ ဆိုတာကို မတွေးတတ်အောင် ဖြစ်ရတယ်။
ပေးဆပ်ရတာတွေ အကြောင်းမဲ့ကုန်တာ များနေပြီမို့ စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်..
ဒါပေမယ့် ပေးဆပ်ဖို့အထုံပါလာသူတွေက ပေးဆပ်နေကြဦးမှာပဲ။ ကိုယ့်ပေးဆပ်မှုနဲ့ ထိုက်တန်သူတွေကို ဆုံတွေ့နိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
Do what you do best bro.
ကိုလောရှည်ပြောတာ အမှန်ပဲ။ ကျွန်တှော့ ဘလော့က အစကတည်းက CC-NA-SA ပေးထားတာ။ ကွန်မာရှယ်နဲ့ မပတ်သက်ရင်၊ တိုက်ရိုက်မကူးရင် အိုကေတယ်လို့ ခွင့်ပြုထားပာတယ်။ ဒီပိုစ့်မှာ အဲဒီစာ တင်လိုက်တာက အကြောင်းရှိလို့ပာ။ အဲဒီအတွက်လည်း အတှော ရှင်းလိုက်ရတယ်။ ပြီးတော့ ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့သူတွေကို ဖမ်းတယ်ဆိုတာလည်း မဟုတ်ပာဘူး။ ဒာလည်း ကျွန်တှော့ ကိုယ်တွေ့ပဲ။ ဘာတွေ ရေးနေကြတာလဲ မသိဘူး။ :(
လင်းလက်ရေ တခာတလေတော့လည်း စိတ်အချဉ်ပောက်လာတတ်တာမျိုး။ အကိုက ပျှောပျှောနေတတ်တဲ့သူလား၊ မိုက်ရိုင်းတတ်သူလား ဆိုတာ ညီမတို့ အသိဆုံး။ ဒာပေမယ့် ယဉ်ကျေးတာက လူတိုင်းနဲ့ မတန်ဘူးဆိုတာ တဖြည်းဖြည်း သိလာရတယ်။
Rita ရေးသလိုပဲ အဲဒီတုန်းက စာရေးဓာတ်ပုံတင် တထိုင်တည်း လုပ်ခဲ့တာ။ တစ်ချက်လေးတောင် မစဉ်းစားမိခဲ့ဘူး။ ဒာပေမယ့် ကိုယ်က အထေ့အငော့လေးတွေ ရေးတတ်တယ်ဆိုတာ ဖတ်ဖြစ်တဲ့သူ သိပာတယ်။ အဲဒီပုံ ရောက်သွားချိန်မှာ အဲဒီလို လက်က အလိုလို ရေးလိုက်မိတယ် ထင်မိတယ်။ မမှတ်မိဘူး။
ကိုသူရိန် ပြောတဲ့ ကျွန်တှောနဲ့ အပောင်းအပာတွေက အစိမ်းဖြစ်နေပြီး သူတို့က နက်နေတယ် သတိထား ဆိုပြီး မှတ်ချက်ပေးတဲ့ လူကတော့ တကယ့် ချီးဘရိန်းဗျာ။ အင်တာနက် အခုမှ သုံးဖူးတယ် ထင်ပာရဲ့။
ကိုညီလင်းဆက် ပြောတဲ့ အဲဒီဆရာမရေးတဲ့ဆိုက်မှာ တင်ထားပြီးပြီးချင်း သွားဖတ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်လိုသဘောနဲ့ရေးလဲ ဆိုတာတော့ မစဉ်းစားတတ်အောင်ဖြစ်မိတယ်။ ကျွန်တော် စိတ်မဝင်စားတဲ့အပိုင်းဖြစ်နေ
တော့ ကျွန်တော် မစဉ်းစားတတ်တာဟာ ကျွန်တော်ဥာဏ်မမှီတာပဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါလိမ့် မယ်။ Credit မပေးတဲ့ပြဿနာကတော့ နောက် ၁၀နှစ်ကြာလည်း ရှိနေဦးမှာပဲလို့ ကျွန်တော် ထင်တယ်။ ကိုညီလင်းဆက်ကို Pro-Blogger တစ်ယောက်အနေနဲ့တော်တော်များများက လက်ခံထားတယ်ဆိုတာကတော့ ငြင်းလို့မရပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ ကျောင်းဆင်းအချင်းချင်းမို့ ကိုညီလင်းဆက်လို လူတစ်ယောက်အတွက် ကျွန်တော်ဂုဏ်ယူပါတယ်။
ကျွန်တော်က အကို့ ကိုအားပေးပါတယ်။
ဓာတ်ပုံနဲ့ ချက်ချင်းတင်နိုင်တာကိုလည်း ချီးကျူးပါတယ်။
အမြဲတမ်း အားပေးနေတယ် ..
သတင်းတွေ ဦးဦးဖျားဖျား တင်ပေးလို့ ကျေးဇူးတင်တယ်။
ညီလင်းဆက်ရေ...လောကမှာ ဘုရားတောင်မှ အကဲ့ရဲ့ အဆဲ အပြော မလွတ်ခဲ့ပါဘူး...ကိုယ်လုပ်တဲ့လုပ်ရပ်ကို
သမာသမတ်ကျကျ ရှု့ဒေါင့်ကကြည့်ပြီးတော့ မှန်တယ်ထင်တာကို လုပ်ဖို့ပြောဖို့ပဲလိုပါတယ်...
နောက်ပြီးတော့ လူဆိုတာမျိုးဟာလဲ ဘာပဲပြောပြော
ကိလေသာတွေ လောဘ ဒေါသ မောဟတွေနဲ့မို့
မျှမျှတတ မှန်မှန်ကန်ကန် တွေးတတ်တဲ့လူရှိသလို ဒီလို
သတင်းထူးတွေသိကြပါစေ ဆိုတဲ့ စေတနာသန့်သန့် နဲ့
အကျိုးပေးပါတယ်...ဘုရားဟာလဲ သတ္တ၀ါတွေကို ကယ်တင်ချင်တာကြောင့်ကြိုးစားခဲ့တာပါ
ဘုရားဖြစ်ချင်တာမဟုတ်ပါဘူး....လောကမှာ သူရဲကောင်းလို့လူတွေသပ်မှတ်တာခံခဲ့ရတဲ့လူတွေဟာလဲ သူရဲကောင်းဖြစ်ချင်လို့လုပ်တဲ့လူမပါခဲ့ပါဘူး...
အများအကျိုးကို အနစ်နာခံဆောင်ရွက် ချင်တဲ့စိတ်ပဲရှိခဲ့ကြတာပါ...ခုကိစ္စမှာလဲ နိုင်ငံရေးတွေ
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအမြင်တွေ အဲတာတွေထက် လူသားချင်း စာနာထောက်ထားမှု အသက်အန္တရယ် ကနေကာကွယ်ဖို့ ဒုက္ခရောက်နေတာက်ိုလာကယ်မယ့်ဘယ်အဖွဲ့ကိုမဆို
ကြိုဆိုကြရမှာပါပဲ..နေရာတိုင်းမှာလူဆိုးကြီးပဲမဟုတ်ပါဘူး...လူကောင်းလဲရှိကိုရှိပါတယ်.....ဒါလူတိုင်းသိပါတယ်....မသိချင်ယောင်ဆောင်ပြီးတော့ ငါ့စကားနွားရပြောချင်တဲ့လူရှိရင်လဲ ပြောပါစေဗျာ...မောရင်တိတ်သွားပါလိမ့်မယ်...ခင်ဗျားပိုစ့်အတွက်ကျေးဇူးပါဗျား........
မျက်နှာဖုံးတွေရဲ့နောက်က လူတစ်ယောက်ရဲ့သရုပ်မှန်ကို အဲဒီလူပြောတဲ့စကားတွေကိုကြည့်ပြီးခန့်မှန်းလို့ရတယ်။ မပြောသင့်ဘဲပြောတဲ့ စကားလုံးတွေကနေ အဲဒီလူရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုသိနိုင်သလိုပဲ ပြောသင့်ရက်နဲ့ ရေငုံနှုတ်ပိတ်နေတာကိုကြည့်ပြီးတော့လည်း အဲဒီလူရဲ့စိတ်ထားကို သိနိုင်တယ်။ သင်္ကြန်အတက်နေ့ဗုံးကွဲပြီး နှစ်ဆန်းတစ်ရက်နေ့တစ်ခါထပ်ကွဲတော့ " ဒီတစ်ခါကွဲတာတော့ဖြစ်သင့်တယ် ထောက်ခံတယ်" လို့အရှက်မရှိ ဝမ်း
သာအားရထအော်တာတွေ တွေ့ရတော့တော်တော်လေးစိတ်ပျက်မိတယ်။ ဘယ်အချိန် ဘယ်နေရာမှာပီပေါက်ပေါက် ဘယ်သူပဲသေသေ အကြမ်းဖက်လုပ်ရပ်ကိုဆန့်ကျင်ရမှာပဲမဟုတ်ဘူးလားဗျာ။ အစ်ကိုလုပ်ခဲ့တာမမှားတဲ့အတွက် ဒွိဟဖြစ်နေစရာမလိုပါဘူး။ ဦးနှောက်မရှိတဲ့သူတွေအချိန်တန်ရင် မောသွားပါလိမ့်မယ်။
ကိုညီလင်းဆက် ဘလော့ကို ဒီဗုံးပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်မှ သိတာပါ။ကြိုးစားအားထုတ်မှု အတွက် ချီးကျူး ဂုဏ်ယူမိပါတယ်ဗျာ။ ကွန်မန့် တိုက်ပွဲအတွက် စိတ်ညစ်ခံ
မနေပါနဲ့ အမှန်ကို မြင်နိုင်ပြီး အားပေးမယ့်သူတွေ ရှိဦးမှာပါဗျာ။ ဒေါ်မေငြိမ်းရဲ့ အတွေးနဲ့ ပက်သက်လို့တော့ အဲ့ဒီလို အချိန်မျိုးမှာ လူနာတွေကို ကယ်ဆယ်ဖို့ ဆေးရုံ ပို့ဖို့ ကလွဲလို့ ရဲတွေကို ကြိုမကြိုက
အဓိက မကျဘူးလို့ မြင်မိပါတယ်။ ဘာကြောင့် တွေးတာလဲ ဆိုတာကတော့..........
politicians တွေက ပညာရှင်ကို သည်းခံလေ့ရှိတယ်လို့ပဲ ကြားဖူးတာဗျ။ အခုက ပြောင်းပြန်ဖြစ်နေတာပဲ။သူတို့ကို ပြန်သည်းခံနေရတယ်။ တစ်ခုတော့ ရှိတယ်။ Politicians lie more. ဆိုတာပဲ။
Sad for those who died and injured...and having sorrows for them..
But hey...Lynn Seck I'm proud of you! :)
ငါ့ညီ ကျိုးစား ဆက်လုပ်။ အဲ..သတိတော့ရှိကွာ။ ပုတ်ခတ်ပြီးတမျိုး၊ မြှောက်ပင့်ပီးတဖုံ၊ ဒေါသဖြစ်အောင် "ဆွ" ပြီးတသွယ် အမျိုးမျိုး ရှေ့မှာတွေ့ရဦးမယ်။ ပညာသတိနဲ့ ရဲရင့်စွာ ရှေ့ဆက်ပြီး အများအကျိုး ဆထက်ပိုး ရွက်နိုင်ပါစေ။ :)
သားရေ အန်တီကတော့ သားကို ကျေးဇူးတင်တယ် အန်တီတို့လိုနယ်က သူတွေ သတင်းအမြန်သိရလို့လေ။ ဖြစ်ရပ်ကတော့ ဘယ်သူဘဲလုပ်လုပ် လူမဆန်မှု အသိဥာဏ်မဲ့မှုကို ပြနေတာပါဘဲ။ ဝေဖန်မှုတွေကတော့ အကောင်းနဲ့ အဆိုးတွဲနေကြမှာပါဘဲ။ ရင်ထဲ မှာ ထားမနေပါနဲ့။ အန်တီလဲ ဆ၇ာမတစ်ယောက်ပါ။ ဒေါ်မေငြိမ်း ကိုတွေးစေချင်တာကတော့ ပြည်သူတွေက ရဲတွေကို ကောင်းတာလုပ်တဲ့အချိန်မှာ ပြည်သူ့ရဲ အဖြစ်ကြိုဆိုမှာ ဖြစ်ပြီး မကောင်းတာလုပ်ရင်လဲ ရှုပ်ချမယ်ဆိုတာပါဘဲ။ အမြဲမုန်းနေရအောင် ကမ္ဘာ့၇န်သူတွေမဟုတ်ကြပါဘူး။ အမှားအမှန်ကို အဂတိကင်းကင်းနဲ့ တွေးစေချင်တာပါဘဲ။ ငါ့စကားနွားရပြောတာမျိုးကတော့ မူရင်းရှိပြီးသားကြည်ညိုမှု အထင်ကြီးမှုတွေကိုပျက်စေပါတယ်လို့။ ဒီလိုရေးလို့ အန်တီက အစိုးရဘက်တော်သားမဟုတ်ပါဘူး။ အန်တီတို့ကိုယ်တိုင်ကလဲ ရတဲ့လစာနဲ့ မတန်အောင်လုပ်နေရတဲ့ အနှိမ်ခံ ၀န်ထမ်းတွေရယ်ပါ။
ညီလင်းဆက် ဘလော့ကို ဒီဗုံးပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်မှ သိတာပါ။ကြိုးစားအားထုတ်မှု အတွက် ချီးကျူး ဂုဏ်ယူမိပါတယ်။
blog link ယူထားလိုက်ပါတယ်။သတင်းထူးဦးလေးတွေ
ရတဲ့ comment လေးပုံသုံးပုံက ဆဲစာတွေချည်းပဲမို့ စိတ်မပျက်ပါနဲ့ အစ်ကိုရဲ့ အားထုတ်မှုကိုမလျော့လိုက်ပါနဲ့ မြန်မာလူမျိုးတွေက ဒီလိုပဲဟာ နားလည်ပေးလိုက်ပါနော် အစ်ကိုကြိုးစားမှုနဲ့ သည်းခံစိတ် ဥာဏ်ပညာကိုလေးစားပါတယ်
ဘာလေးများအသစ်ရမလဲလို့နေတိုင်းဝင်ကြည့်ဖြစ်ပါတယ် အစ်ကိုသင်ပေးထားတဲ့ Google Reader ထဲကပဲ ဖတ်ဖြစ်လို့သာ comment မထားဖြစ်တာပါ
I just wrote the following comment in MN blog:
If you honestly want to understand, the following points may help you:
* (+100)+(-1) = (+99) will not always true. e.g. Among 100 glasses of water, even if only 1 glass is poisonous, none of those will be consumable.
* Doing good stuff continuously is justanormal personality. But making only one bad stuff even once inalife will be called crime.
@ dead walker, you are another calculator but surely not an observer. In life and death situation, no one wants to die of thirst even knowing there is one poisonous glass among 100. And those who dare to try, recognize and appreciate 99 glasses of pure water will have chance to live on. And please let me remind you that people, including you, me and such polices can always become better, we can change to be better. if you know the good personality is to be developed with doing good stuff, why you can't recognize and be happy for suchalittle word defending such dark, terrible, inhumane bloody event. Stop saying bad to others. it won't help the situation better.
ဒီလိုပေါ့ ငါ့တူရာ၊ celebrity ဆိုတော့ ကြုံရဆုံရဘုံဘဝပေါ့။ အကောင်းဘက်က တွေးတော့လည်း အခုရေးစရာ တစ်ခုရပြန်ပြီ မဟုတ်လား။ ကိုယ်ပိုင်ဖန်တီးထားတဲ့ ပို့စ်တွေကို ကြိုးစားတင်တာ ကောင်းပါတယ်။ ဦးလည်း ဒီနေရာမှာတော့ သဘောထား ထပ်တူပါပဲ။
ဘာလုပ်လုပ် အပြစ်မြင်နေကြတာကတော့မြန်မာမှာထုံးစံဖြစ်နေပါပြီ ကိုညီ....ကိုညီ့ ယုံကြည်ချက်နဲ့ ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုကိုကျွန်တော်လေးစားပါတယ်.အမှန်ကိုအမှန်အတိုင်းပြောတာ...